तपाईँले आफ्नी आमालाई सम्झेर लेख्नुभएको शोककाव्य 'ठूली' भर्खर पढिसिध्याएँ । आमाका बारेमा लेख्नुभएको राम्रो हो । आमाका बारेमा धेरै मानिसहरू संवेदित हुन्छन् । स्वाभाविकै हो , आमाले जत्तिकै माया र त्याग गर्ने नातादार वा अन्य व्यक्ति पनि कमै भेटिन्छन् ।
आमाका बारेमा लेख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मैले सर्वप्रथम श्यामप्रसादबाट पाएको थिएँ । उहाँले आफ्नी आमाका बारेमा आमाको जीवन छँदै लेख्न नसकेकामा पछुतो मान्नुभएको थियो । त्यसैले म आमाको जीवन छँदै लेख्न चाहन्थेँ तर सकिनँ । जीवन छँदै लेख्ता त्यसमा आमाको चित्त नबुझ्न सक्थ्यो । त्यसले हामीबीचको समझदारीमा असर पार्न पनि सक्थ्यो । त्यसैले मैले मेरी आमाको देहावसानको एकतीसौँ दिनमा मात्र 'आमा' शीर्षकमा संस्मरण लेख्न सकेँ, जुन तपाईँले पढिसक्नुभएको हुन सक्छ ।
'ठूली' पढ्दा मैले तपाईँकी आमालाई मेरी आमाको समानान्तरतामा हेरेछु । तपाईँकी आमाले तपाईँलाई गर्नुभएको मायालाई मेरी आमाले मलाई गर्नुभएको ठानेछु र तपाईँकी आमाले तपाईँका बारेमा सोच्नुभएको कुरा मेरी आमाले मेरा बारेमा सोच्नुभएको ठानेछु । त्यसैले 'ठूली' का सिलोकहरू पढ्दा म द्रवित भएको रहेछु ।
'आशा किन नगरेकी त्यो गुनको गुन
बैगुनीले सकेनछौँ तिम्रा आँसु धुन'
पढेपछि मैले आफूलाई थाम्न सकिनँ, त्यसपछि दस मिनेटजति थामिएर पढ्न खोजेँ पुन: पढ्न सकिनँ । हो, त्यही रन्कोमा मैले तपाईँलाई एस्एम्एस् गरेको थिएँ 'रुने किन लेख्नुभएको ? रोएरै पढ्न सकिनँ मैले त !'
मेरो एस्एम्एस्ले पक्कै तपाईँलाई मर्माहत तुल्याएको हुनुपर्छ । आफ्नी जन्मदातृसँग सधैँभरिको लागि बिछोड कुनै पनि सुयोग्य छोराछोरीका लागि मार्मिक हुन्छ, त्यही कुराको अभिव्यक्ति थियो तपाईँको लेखाइमा । नितान्त आफ्नो संवेदना पोखिएको थियो त्यसमा । कसैलाई पीडा पार्ने उद्देश्य थिएन त्यो लेखाइको र पनि मैले चित्त कुँडिने एस्एम्एस् पठाएछु ।
कहिलेकाहीँ संवेदित पाठकले यसो गर्न पनि सक्छ। यसले असमञ्जसमा परिन्छ, चित्त दुख्ने स्थिति आउन पनि सक्छ तर यो लेखकको सफलता पनि हो ।
तपाईँको पुस्तकमा केही मार्मिक प्रसङ्गहरू आएका छन् । महिलाले हलो जोत्न हुँदैन भन्ने धारणा र अर्कातिर आमाले हलो जोत्नै पर्ने बाध्यता । यस्तै 'बाहुनले च्याउ खान हुँदैन' भन्ने धारणा र अर्कोतिर च्याउ खानै पर्ने बाध्यता । यस्ता केही गर्न नमिल्ने भनिएका बाध्यताहरू यथार्थताका विरूध्द छन् तर नगरी नहुने प्रकारका छन् । निकास दिन नसक्नेको औँलो ठड्याउने हक हुँदैन तर हाम्रो समाज उपयुक्त निकास दिने ल्याकत पनि राख्तैन र औँलो पनि ठड्याउँछ । पति भएर आफ्नो भूमिका वहन गर्न नसक्नेलाई स्याबासी दिने हाम्रो समाज लाजै नमानी एउटी पत्नी हुँदाहुँदै साली स्याहार्नेलाई धाप मार्छ । निरीहका पक्षमा बोल्न सक्तैन र चाहँदैन तर आफूलाई बाठो ठान्छ । हो; यो नचाहिँदो बाठोपनको तपाईँले पर्दाफास गर्नुभएको छ, राम्रो पक्ष हो ।
अत्याचारको पराकाष्ठाले मानिसलाई सहिष्णु वा विद्रोही जस्तो पनि बनाउन सक्छ । सहने प्रवृत्तिकाहरू सहेरै जिन्दगी बिताइदिन्छन् तर सहन नसक्नेहरू विद्रोही बन्न पुग्छन् । तपाईँ र आमाको बीचको फरक पनि त्यही होला ।
तपाईँ र आमाको बीचको सम्झौता गजब लाग्छ । एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति तपाईँका घरमा अपवादका रूपमा भएजस्तो लाग्छ । सबैका आमाहरू कहाँ त्यति लचिला हुन्छन् र ? आमालाई त्यो कुरामा मनाउन तपाईँ सफल हुनुभएको रहेछ ।
आफ्नो मृत्युपश्चात् पिण्ड-पानी नदिन गर्नुभएको आग्रह जायज छ ।
अँ, तपाईँले आफ्नी आमाको दिगो सम्झनाको स्मारकका रूपमा केही गर्न खोज्नुभएको रहेछ । त्यसो गर्दा सम्भव भए वृध्दाश्रम नै राम्रो हो, नसक्ता पुरस्कार स्थापना गर्दा पनि हुन्छ । यसमा हाम्रो अनुभवले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ ।
हाम्रो बुवा २०३२ सालमा नै बित्नुभयो । हामी आमाकै संरक्षणमा हुर्क्यौँ । आमा २०६३ चैत्रमा बित्नुभयो । हामीले आमाको जीवनकालमै अर्थात् २०५२ सालमा 'शिव-सावित्री प्रतिष्ठान' स्थापना गर्यौँ र २०५४ सालदेखि केही वर्षसम्म साहित्यिक कार्यक्रमको प्रायोजन र लगभग २०६० देखि आयोजन नै गर्न थाल्यौँ । आमा खस्नुभएपछि त्यस क्रममा केही परिवर्तन आएको छ ।
आमाको जिउनीबाट क्रिया र बरखी गरेर बाँकी रहेको जग्गा आमाबुवाकै नाममा रहने सर्तमा 'शिव-सावित्री आँखा अस्पताल' खोल्न दिने निर्णय भएको छ । अस्पतालले सो सहयोग निश्चित समयभित्रमा प्रयोग नगरेमा त्यसका बारेमा पुन: निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यता हेटौँडामा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत व्यवस्थापनमा प्रत्येक वर्ष दिने गरी 'शिव-सावित्री मुक्तक साहित्य पुरस्कार' स्थापना गरिएको छ । 'झरना-हेटौँडा सेतु'द्वारा आयोजना गरिने प्रत्येक वर्षको चौथो मुक्तक गोष्ठीका उत्कृष्टलाई दिइने पुरस्कार राशि रु ११११।– रहेको छ ।
यस्तै वा अन्य खाले पुरस्कार स्थापना गरेर पनि पितृलाई सम्झने बाटो गर्न सकिन्छ ।
मानिसले मरेर जाँदा केही लाने होइन, छोडेर जाने कीर्ति वा अकीर्ति हो । मरेर जाने त गइहाल्छन्, उनीहरूलाई सम्झने बाटो गर्नाले आफूलाई पनि सन्तुष्टि मिल्छ, यो नै बाँच्नेका लागि प्राप्ति हो ।
चिठी लामो पो हुन थालेछ । अरू कुरा भेटमा वा अर्को पत्रमा गरौँला । अहिलेलाई बिट मारेँ है त !
कमलो वस्तुमा हुने गुण नै कोमलता हो । कोमल हुनु भनेको नरम हुनु हो ।
कुनै वस्तु नरम छ भने त्यसलाई स्पर्श गर्न पाउँदा मात्र पनि हामीलाई आनन्द आउँछ । नरम वस्तुलाई छुँदा आउने आनन्द साहित्यमा नआउन पनि सक्छ ।
साहित्यमा कोमलता भनेको मन छुने हुनु हो । मन छुने साहित्यिक रचनाले कहिले मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ भने कहिले पीडित समेत । कविता अझ पद्य कविताका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा माधुर्य गुण भएका कारण करुण, शृङ्गार आदि रसका रचनाहरू मूलत: कोमल हुन्छन् ।
शृङ्गार रस प्रधानताको पृथक्ता बोकेर आएको हुनाले गजल कोमल हुन्छ तर गीत अझ कोमल हुन्छ । यस्तै कविता तथा मुक्तकहरू पनि कोमल हुनु राम्रो हुन्छ । हाइकु, हाइकाइ, क्षणिका तथा छोकहरू भने अलि पृथक् प्रवृत्तिका हुन्छन् । जुन विषयमा हामी जति पग्लन सक्छौँ, जति हामी सलल बग्न सक्छौँ, त्यति नै त्यो सुबोध्य, हृदयसंवेद्य वा मर्मस्पर्शी हुन्छ, जति मर्मस्पर्शी हुन्छ; त्यति नै लयात्मक, मधुर, स्तरीय तथा चिरस्थायी हुने सम्भावना हुन्छ ।
कवितामा कोमलता खोज्दा छन्दमय कविताहरूमा हामी यसको पर्याप्त प्रभाव पाउन सक्छौँ । महाकवि देवकोटाको ‘मुनामदन’, माधवप्रसाद घिमिरेको ‘राजेश्वरी’ तथा ‘गौरी’ जस्ता खण्डकाव्य तथा शोक काव्यहरू कोमल कृतिका उदाहरण हुन् ।
कविता, गीत, गजल जस्ता पद्य विधामा मात्र होइन मानिसका पीडा तथा आनन्दसँग एकाकार हुन सकेका गद्य रचनाहरू पनि कोमल हुन सक्छन् । कृष्ण धरावासीको ‘झोला’ र महेशविक्रम शाहको ‘गनाउने चामल’ कथा समेत मर्म स्पर्शी र कोमल छन् । मानवीय संवेदनाको गहिराइसम्म मनग्गे डुबुल्की मारी लेखिएका रचनाहरू कारुणिक छन् र स्तरीय पनि ।
आनन्दका क्षणलाई मानवीय संवेदनाले च्याप्प समात्न सकेका खण्डमा आनन्दयुक्त रचनाहरू पनि कोमल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ तर पीडादायक वा करुणरसप्रधान रचनाहरू नै मूलत: कोमल हुन्छन् ।
साहित्यकार चाहे जुनसुकै विधामा सिध्दहस्त होस्, उसले मिठो शैलीलाई रोज्न सक्यो भने धेरैको प्यारो हुन सक्छ ।
मिठो रचना लेख्न खोज्दा स्वत: मस्तिष्कभन्दा हृदय परिचालित हुन्छ । मस्तिष्क बढी परिचालन हुँदा बौध्दिक रचनाहरू तयार हुन्छन् । बौध्दिकताका दृष्टिले ती स्तरीय र शाश्वत भए तापनि तिनले पाठकका मन जित्न नसकेका हुन सक्छन् । हृदय, मस्तिष्क र हातको क्रमश: संयोजन गरी हामीले त्रिशङ्कु रचना सिर्ज्यौँ भने त्यो निबन्ध नै भए पनि कोमल हुन सक्छ । निबन्धका क्षेत्रमा खास गरी आत्मपरक निबन्ध तथा नियात्रा कोमल हुने सम्भावना हुन्छ । कोमल रचनामा खुबी भएका साहित्यकारहरू नै लोकप्रिय हुन सक्छन् ।
प्रकृति तथा शृङ्गार जस्ता विषयमा लेखिएका रचनाहरू कोमल हुने सम्भावना हुन्छ । तैपनि व्यक्तिले आफ्ना विगतलाई रत्ति नलुकाई लेखेका रचनाहरू नै कोमल हुन्छन् ।
रचनालाई कोमल बनाउन आफू कोमल हुनु पर्छ । कठोर हृदय भएका व्यक्तिबाट कोमल रचनाको अपेक्षा गर्न सकिन्न । केही गरी कठोर हृदयीले कोमल रचना लेखेका छन् भने ती आदर्शका फोस्रा स्वाङ हुन्छन् । तसर्थ कोमल रचना कोमल हृदयीले मात्र लेख्न सक्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
सबै मानिसले एकै प्रकारको काम गर्नुपर्छ, एउटै धारमा बग्नु पर्छ भन्ने छैन तर हरेकले आआफ्ना रचनालाई यथासम्भव हृदयस्पर्शी, मधुर तथा कोमल बनाउन सके साहित्यका नरम विधाहरूले अग्र गति लिन सक्छन्, स्तरीय हुन सक्छन् र आफ्ना पाठकहरू माझ प्रिय हुन सक्छन् । त्यसैले आउनुहोस्, हामी पनि कोमल रचना लेख्ने प्रयत्न गरौँ ।